Imikhiqizo Yokukhanyisa ye-LED Ukungena Emakethe yaseJapan - Shenzhen Dengfeng Power Co., Ltd.
Ikhaya > Izindaba Zemboni > Imikhiqizo Yokukhanyisa ye-LED Ukungena Emakethe yaseJapan
Okokuqala, izindinganiso zokukhanyisa nge-Japan LED
Ngokwenhlolovo ye-Te information, eJapan azikho izindinganiso ezisemthethweni zokuphepha komkhiqizo we-LED kanye nezitifiketi. IJapan Association Manufacturers Association ilungiselele indinganiso yomkhakha waseJapan (JIS) yamalambu e-LED ukucaciswa kokuphepha kwedatha yokuqala, kepha lokhu kuzonikezwa kuze kube unyaka ozayo. Okwamanje, amanani aphansi amalambu e-LED ahlala kuyo yonke imakethe, ukwethulwa kwamazinga okukhanyisa we-LED kuseduze, izinkampani zaphesheya kwezilwandle manje ezifuna ukungena emakethe yaseJapan zingabhekisa kulezi zindinganiso ezimbili ezilandelayo.
1, isitifiketi se-JIS (izindinganiso zezimboni zaseJapan)
Ukuqinisekiswa kwe-JIS kungumthetho ojwayelekile kazwelonke wezimboni kanye namazinga owaziwayo, wokuzithandela. Izindinganiso ze-JIS zezindlela zokulinganisa zidinga ukubheka inamba yemodeli, ubukhulu, ukusebenza nokuphepha kwemikhiqizo. Lapho ikhwalithi yomkhiqizo ngokuhambisana namazinga we-JIS wokuqinisekiswa kwekhwalithi, ingafakwa kahle emakethe yaseJapan. Izimakethe zaphesheya seziphelele zingamazwe nezifunda eziyi-12 sezisebenzisa indinganiso yezitifiketi ze-JIS: Korea, North Korea, China yaseTaiwan, China, Indonesia, Philippines, Myanmar, Thailand, neViet Nam, neMalaysia, kanye neNdiya neMexico.
2, isitifiketi se-PSE
Ifuna ukungena emakethe yaseJapan yezinkampani zikagesi, ukuphepha kwe-PSE isitifiketi esiyimpoqo. I-PSE inezinhlobo ezimbili zamamaki wesitifiketi: I-PSE Diamond certification mark (impoqo) isetshenziselwe umkhiqizo ocacisiwe, amamaki we-PSE Circle (ngokuzithandela) asetshenziselwa isitifiketi somkhiqizo esingacacisiwe. Futhi lesi sitifiketi yiJapan kuphela ethatha umthwalo wabakhiqizi noma abangenisa impahla ngaphandle, kunabakhiqizi bangaphandle, eJapan isitifiketi esiqine kakhulu futhi sinedumela eliphezulu.
:Imboni Yokukhanyisa ye-LED Ebangelwa Yimakethe Ephezulu "ukuqhuma"
:I-Shenzhen Dengfeng Power Supply Co., Ltd. Umbukiso wempumelelo ku-LED Expo Thailand 2019